एनआरएनएमा अस्वीकृत त्यो भोटिङ मेसिन
एनआरएनएमा अस्वीकृत त्यो भोटिङ मेसिन प्रयोग होला १४ मंसिरको उपनिर्वाचनमा ?
निर्भीकजंग रायमाझी काठमाडौं, १ कात्तिक
पहिलो र दोस्रो संविधानसभा भित्र हुने आन्तरिक चुनावमा धेरै सभासदले हाल्ने मत बदर हुन्थ्यो । पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा ती सभासदकाे असक्षमताको खिल्ली उडाइन्थ्यो । ‘कागजमा भोट हाल्न नसक्ने सांसदको के काम’ भन्दै सभासदकाे मजाक उडाइन्थ्यो ।
त्यतिबेला डिजिटल प्रविधिबाट चुनाव हुन्थे भने संसदभित्र त्यति धेरै मत बदर हुन्थेनन् ।
इलेक्ट्रोनिक प्रविधिबाट निर्वाचन हुँदा भोट हालिने व्यक्ति, पार्टी वा समूहको तस्वीर डिजिटल मतपत्रमा नै डिस्प्ले हुन्छ । तपाईंले मत हाल्दा तरिका मिलेन भने भोटिङ मेसिनले नै मिलेन भन्ने संकेत गर्छ ।
मेसिनको नेपाल चर्चा
गैरआवासीय नेपाली संघको नवौं विश्व सम्मेलनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिनबाट मतदानको तयारी गरियो । मेसिनमार्फत केही मत खसे । तर, सबै मत मेसिनमा खस्नै पाएन । उम्मेदवारहरूले नै मेसिनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाए । फेरि मतदानमा काजगकै प्रयोग भयो । अहिले निर्वाचन परिणाम आइसकेको छ ।
विश्वभरि प्रचलनमा रहेको इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन नेपालको परिवेशमा नौलो नै छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन र संविधान जारी भएपछि भएको संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा पनि विद्युतीय भोटिङ मेसिनको तयारी गरियो । तर अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरियो ।
तत्कालीन नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा समेत प्रयोग गर्ने भनिएको बिद्युतीय भोटिङ मेसिन अन्तिम समयमा आएर अध्यक्षका प्रत्यासीहरूकै सहमतिमा प्रयोगमा ल्याइएन । तर छिमेकी मुलुक भारतको हालै सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनमा भने यो मेसिनबाटै मतदान गराइएको थियो ।
नेपालका यी केही घटना प्रयोग भएर सफल नभएका र प्रयोग गर्न खोजिएर नभएका उदाहरण हुन् ।
नेपाली श्रेय रामलक्ष्मणलाई
तर विगत १० वर्षदेखि ‘रामलक्ष्मण इनोभेसन्स’ले नेपालमै इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन सञ्चालन गर्दै आएको छ । उनीहरूले बनाएको भोटिङ मेसिनबाट विभिन्न संघसंस्था र राजनीतिक दलको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ ।
भर्खरै मात्र एनआरएनको निर्वाचनमा पनि रामलक्ष्मण टेक्नोलोजिजको यही इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनबाट निर्वाचन गर्ने निश्चित थियो । तर एक समूहले मेसिन बिग्रिएको चर्चा चलाएपछि एनआरएनएजस्तो अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले कागज र मसीकै प्रयोग गरेर चुनाव गर्‍याे ।
रामलक्ष्मण इनोभेसन्सका रामप्रसाद खरेल भन्छन्, ‘हामीलाई मेसिन सेटअप गर्ने पर्याप्त समय नदिएकाले एनआरएनको चुनावमा हाम्रो मेसिन प्रयोग हुन पाएन । अनि केही समूहले हाम्रो मेसिन बिग्रेको हल्ला फिँजाए ।’
इच्छाशक्तिले दिलायो सफलता
२० वर्षअगाडि नुवाकोटका रामप्रसाद रिमाल र लक्ष्मणप्रसाद खरेल (रामलक्ष्मण) दाजुभाइ डेरा गरेर काठमाडौंमा पढ्न बसेका थिए । उनीहरू बस्ने घरमा इनारबाट डोरी र बाल्टीले पानी तान्नुपर्थ्याे ।
हरेक दिन पानी तान्ने काम गरेर आजित भइसकेका रामलक्ष्मण दाजुभाइले एउटा नयाँ उपाय सोचे । हरेक दिन हातले तानेर पानी निकाल्ने कामको विकल्प के हुन सक्छ ?
उपाय निस्कियो स्वचालित पानी चढाउने मेसिन ।
त्यतिबेला मेसिनको निमार्ण गर्न अगाडि सरेका रामप्रसाद खरेल पुराना दिनको संघर्ष सम्झन्छन् । भन्छन्, ‘समस्याले नै हामीलई नायँ नयाँ आविष्कार गर्न प्रेरित गर्‍याे । केही पनि अप्ठेरो नपरेको भए सायद हामी आजको स्थानमा हुँदैनथ्यौं ।’
त्यही पानी तान्ने मेसिनबाट सुरु हुन्छ रामलक्ष्मणको नयाँनयाँ यन्त्र–उपकरण बनाउने संघर्ष ।
त्यसपछि होम साइरन
विस्तारै देशमा सशस्त्र विद्रोहको समय आयो । मानिसलाई आफू नभएको समयमा कसरी घरको सुरक्षा गर्ने भन्ने चिन्ता हुथ्यो । समस्याको समाधान गर्न पनि रामलक्ष्मण दाजुभाइ नै सक्रिय भए । उनीहरूले ६ महिना लगाएर होम साइरन बनाए ।
‘त्यो साइरनले घरधनी घरमा नभएको समयमा घरमा कोही आयो भने सूचना दिने काम गथ्र्यो’ रामप्रसाद भन्छन्, ‘यो सफलतापछि हामीलाई आफूले निर्माण गर्न सफल यन्त्र उपकरणलाई व्यावसायिक रूप दिने सोच आयो ।’
आफूले बनाएको उपकरणलाई व्यावसायिक रूप दिन सकिन्छ भन्ने सोचेर रामलक्ष्मण दाजुभाइले सन् २००३ मा ‘रामलक्ष्मण टेक्नोलोजिज’को स्थापना गरे । यसको तीन वर्षपछि २००६ मा रामलक्ष्मण इनोभेसन्स प्रालि पनि खोले । अहिले यो संस्थामार्फत उनीहरूले मानिसको दैनिक जीवनमा आइपर्ने कामलाई सहज हुने यन्त्र उपकरण बनाउने काम गरिरहेका छन् ।
बस रुटका लागि एप्स
रामलक्ष्मणले काठमाडौं उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्ने व्यक्तिले आफ्नो रुटमा चल्ने बसको पूर्वजानकारी लिन सक्ने मोबाइल एप्लिकेसन पनि बनाएका छन् ।
यस एपको प्रयोगले यात्रुले नजिकैको बिसौनीबाट बस चढ्न सक्ने भएका छन् । एनसेलले रामलक्ष्मण इनोभेसन्स् प्राइभेट लिमिटेडसँग सहकार्य गदै २०७५ भदौमा ‘लेट्ज गो’ नामक मोबाइल एप ल्याएको हो ।
मोबाइल एप्लिकेसन ‘लेट्ज गो’ बारे रामप्रसाद भन्छन्, ‘यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, सार्वजनिक सवारीसाधनका संचालक र दैनिक सवारी प्रयोग गर्ने यात्रुसँग बृहत् छलफल गरेर हामीले यो एप बनाएका हौं ।’
कस्तो हुन्छ इलेक्ट्रोनिक भोटिङ ?
इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन आयातकार काठको बाकसजस्तै हुन्छ । यसमा गएर आफूले रोजेको उम्मेद्वारलाई चुन्न सकिन्छ । मतपत्र र स्वस्तिक छाप लगाइरहनु पर्दैन । मसी बिग्रेर वा रेखा छोएर मत बदर हुने सम्भावना पनि हुन्न ।
केही वर्षपहिलेसम्म भोटिङ मेसिन भएका बटन थिचेर आफूले रोजेको मानिसलाई मत दिन सकिन्थ्याे । तर, विगत ५ वर्षदेखि यी सबै इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन डिजिटल भइसकेका छन् ।
आफूले मत दिने उम्मेद्वारको फोटो, नाम र पदको विवरण यही डिजिटल बोर्डमा हुन्छ ।
भोटिङ मेसिनका निर्माता रामलक्ष्मण भन्छन्, ‘तीन जनालाई भोट दिनुपर्ने छ तर तपाईंले पाँच जनालाई दिनुभयो भने मेसिनले गलत भयो भनेर तपाईंलाई सूचना दिइहाल्छ । अनि अन्त्यमा हालेका सबै मत सफ्टवेयरको मद्दतबाट एकत्रित गरिन्छ र कम्प्युटरको सहायताले परिणाम केही मिनेटभित्रै निकाल्न सकिन्छ ।’ निर्वाचनका समयमा यस्ता आयातकार बोर्डका धेरैवटा भोटिङ मेसिन राखिएको हुन्छ ।
प्रतीक्षा १४ मंसिरको
इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको प्रयोग गरेर रामलक्ष्मणको कम्पनीले ७० वटाभन्दा बढी निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको छ । रामप्रसाद भन्छन्, ‘नेकपा एमालेको संसदीय चुनावदेखि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेका छौं ।’
संघसंस्थाको निर्वाचन मात्र होइन, देशको आमनिर्वाचन पनि यही इलेक्ट्रोनिक मेसिनबाट सम्पन्न गर्न सक्ने दाबी गर्छन् रामप्रसाद । भन्छन्, ‘राज्यले स्वदेशकै प्रविधि र आविष्कारसँग विश्वास गर्न सक्दैन भने हाम्रो पसिना खेर गएको महसुस हुन्छ ।’
आगामी १४ मंरिसमा देशका ५२ स्थानमा रिक्त जनप्रतिनिधिको निर्वाचन हुँदैछ । अहिलेसम्म आयोगले भोटिङ मेसिनबारे निर्णय भइनसकेकाे बताएको छ । तर, रामलक्ष्मण भने निर्वाचनमा ढुक्क तरिकाले मत हाल्न आफूहरूले विकास गरेको मेसिन प्रयोग गर्न सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक १, २०७६, १५:१९:००